फेसटाइम विन्डोज मा प्रयोग गर्न सकिन्छ?5नि: शुल्क विकल्प | मोबाइल फोरम
फेसटाइम विन्डोज मा प्रयोग गर्न सकिन्छ?5नि: शुल्क विकल्प
ईडर फेरेनो | | कार्यक्रमहरू
FaceTime एक पक्कै पनी एक अनुप्रयोग हो कि पक्कै तपाइँ धेरै लाई परिचित लाग्छ। यो एक भिडियो कलिंग अनुप्रयोग हो कि एप्पल उपकरणहरु मा पूर्वनिर्धारित द्वारा स्थापित छ, दुबै ती आईओएस, iPadOS र macOS को उपयोग गर्दछ। यसको लागी धन्यवाद, तपाइँ तपाइँको साथीहरु, परिवार वा कुनै पनी समस्या बिना तपाइँको कामका सहकर्मीहरु संग भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ, दुबै व्यक्तिगत र समूह च्याट मा।
फेसटाइम विन्डोज प्रयोगकर्ताहरु को बीच एक लोकप्रिय नाम हो, किनकि धेरै यसलाई आफ्नो उपकरणहरुमा स्थापित गर्न को लागी सक्षम हुन चाहन्छन्। दुर्भाग्यवश, यो अनुप्रयोग एप्पल उपकरणहरु मा मात्र उपलब्ध छ, कम से कम अब को लागी (अटकलें लामो समय देखि अन्य अपरेटि systems सिस्टम मा यसलाई शुरू गर्ने सम्भावित योजनाहरु को बारे मा भएको छ)। यस कारण को लागी, हामी विन्डोज मा यी भिडियो कल गर्न को लागी सक्षम हुन को लागी विकल्प को लागी हेर्न को लागी बाध्य छौं।
1 विन्डोज मा फेसटाइम को विकल्प
1.3 गुगल बैठक
1.4 फेसबुक मैसेन्जर
1.5 माइक्रोसफ्ट टोलीहरू
विन्डोज मा फेसटाइम को विकल्प
विन्डोज मा धेरै प्रयोगकर्ताहरु उनीहरु एप्पल लाई माइक्रोसफ्टको अपरेटि system सिस्टम को लागी फेसटाइम को एक संस्करण जारी गर्न चाहन्छन्। यो यो सम्भावना संग एक लामो समय को लागी अनुमान गरीएको छ, यद्यपि अहिले सम्म केहि पनी यसको बारे मा भएको छैन, त्यसैले हामी वास्तव मा थाहा छैन यदि Cupertino फर्म को यो संस्करण शुरू गर्ने योजना छ वा छैन। कुनै पनी अवस्थामा, आज हामी हाम्रो विन्डोज कम्प्यूटर मा यो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न सक्दैनौं। तेसैले हामी पीसी बाट यस्तो भिडियो कल गर्न को लागी विकल्प खोज्न बाध्य छौं।
यस मामला मा राम्रो समाचार यो हो त्यहाँ विन्डोज को लागी फेसटाइम को लागी केहि विकल्पहरु छन्। उनीहरु को लागी धन्यवाद हामी कार्यहरु गर्न को लागी सक्षम हुनेछौं कि हामी एप्पल अनुप्रयोग बाट धेरै चाहान्छौं, त्यो हो, व्यक्तिगत र समूह भिडियो कल गर्न को लागी सक्षम हुन। त्यहाँ यस क्षेत्र मा धेरै विकल्पहरु छन् जसको साथ हामी कुनै समस्या बिना हाम्रो विन्डोज कम्प्यूटर बाट भिडियो कल गर्न सक्छौं। यस प्रकार, पनी यदि तपाइँ तपाइँको पीसी मा FaceTime छैन, तपाइँ एक एप को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रकार्य को मामला मा उस्तै तरीका पूरा गर्दछ। यसको अतिरिक्त, केहि अवस्थामा तपाइँ पनी अतिरिक्त कार्यहरु उपलब्ध हुनेछ।
जूम सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अनुप्रयोगहरु मध्ये एक भएको छ विश्वव्यापी महामारी को कारण, पछिल्लो एक बर्ष मा। यो अनुप्रयोगले हामीलाई विन्डोज कम्प्यूटर सहित उपकरणहरु को सबै प्रकार मा, व्यक्तिगत र समूह मा, दुबै भिडियो कल गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यसैले यो विन्डोज को लागी फेसटाइम को लागी एक राम्रो विकल्प हो। यो अनुप्रयोग पनी व्यक्तिगत उपयोग मा र कम्पनीहरु मा वा शिक्षा मा दुबै एक महान उपस्थिति भएको छ, ताकि तपाइँ यसलाई धेरै मामिलाहरुमा र बैठकहरु को सबै प्रकार मा, मानिसहरुको ठूलो समूह संग पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जूम प्रयोग गर्न सजिलो छ र हामी यसलाई विन्डोज मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्छौं। हामी यो च्याट कोठा बनाउन सक्छौं, ताकि यो सम्भव छ साथीहरु, सहकर्मीहरु वा परिवार संग समूह च्याट गर्न को लागी। साथै यदि हामी अन्य मानिसहरु संग व्यक्तिगत कुराकानी गर्न चाहन्छौं यो सम्भव छ। फेसटाइम को उपयोग बिना कुनै पनी समय मा तपाइँको विन्डोज पीसी मा भिडियो कल गर्न को लागी एक राम्रो तरीका हो। यसको अतिरिक्त, ती कलहरु मा एक च्याट छ, मामला मा हामी फाइलहरु साझा गर्न वा केहि लेख्न चाहन्छौं।
यो अनुप्रयोग गोपनीयता को लागी यसको विवाद भएको छ, जुन धेरै आलोचना गरिएको छ, यद्यपि विभिन्न समस्याहरु यसमा सुधार गरीएको छ। यही कारणले यो अझै पनी एप्पल को जस्तै एक अनुप्रयोग को लागी एक महान विकल्प हो, किनकि यसले हामीलाई यसको मुख्य कार्यहरु दिन्छ। विशेष गरी व्यक्तिगत प्रयोग को लागी, यो केहि हैन कि धेरै समस्याहरु को कारण हुनु पर्छ, तर धेरै कम्पनीहरु यसलाई अन्य कर्मचारीहरु लाई मोड्दै, आफ्ना कर्मचारीहरु संग प्रयोग गर्न बाट बच्न।
संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय कलि and र भिडियो कलिंग अनुप्रयोगहरु मध्ये एक हो, जो धेरै बर्षहरु को लागी बजार मा रहेको छ। स्काइप धेरै महान पहिलो अनुप्रयोग को रूप मा देखीन्छ यस क्षेत्रमा, हाल माइक्रोसफ्ट को स्वामित्व मा। यसको उपस्थिति घट्दै गएको छ, तर यो अझै पनी विन्डोज मा फेसटाइम को लागी एक उत्तम विकल्प हो, उदाहरण को लागी। यस अनुप्रयोग को उद्देश्य को लागी हामीलाई हाम्रो पीसी बाट अन्य व्यक्तिहरु संग कल र भिडियो कल गर्न को लागी अनुमति दिन को लागी हो। यसको अतिरिक्त, यो पनी पीसी, ट्याब्लेट र स्मार्टफोन दुबै अन्य अपरेटि systems सिस्टम मा डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
स्काइप प्रयोग गर्न सजिलो छ र हामी तपाइँ भ्वाइस कल र भिडियो कल गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, केहि व्यक्तिगत चैट र एक समूह च्याट मा दुबै सम्भव छ। तेसैले तपाइँ यसलाई कुनै समस्या बिना साथीहरु, परिवार वा सहकर्मीहरु संग कुराकानी को दौरान प्रयोग गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ। धेरै बर्षहरु मा, धेरै प्रकार्यहरु लाई एप मा सम्मिलित गरीएको छ, जस्तै प्रत्यक्ष उपशीर्षक (धेरै शोर को क्षणहरुमा वा सुन्ने समस्याहरु संग मानिसहरु को लागी आदर्श)। एक च्याट लेख्न वा यी च्याटहरुमा फाइलहरु पठाउन को लागी।
स्काइप मा कल र भिडियो कल नि: शुल्क छन् सबै समय मा, अर्को पक्ष हो कि यसको उपयोग धेरै सहज बनाउँछ। तपाइँ मात्र एक खाता बनाउन वा तपाइँको माइक्रोसफ्ट खाता (आउटलुक वा हटमेल) को उपयोग गर्न को लागी यो पहुँच गर्न को लागी हुनेछ। तपाइँ विन्डोज सम्पर्कहरु जोड्न वा मानिसहरु को लागी आफ्नो ईमेल वा प्रयोगकर्ता नाम को उपयोग गर्न को लागी खोज्न सक्नुहुन्छ र यस प्रकार अनुप्रयोग मा सजीलै च्याट सुरु गर्न सक्षम हुनुहोस्।
गुगलको आफ्नै भिडियो कलिंग सेवा छ फेसटाइम को एक विकल्प को रूप मा विन्डोज बाट पहुँच गर्न। गुगल मीट एक सेवा हो कि सिद्धान्त मा शैक्षिक वा व्यापार क्षेत्र को उन्मुख छ, तर धेरै मानिसहरु लाई आफ्नो साथीहरु र परिवार संग भिडियो कल गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यो सेवा तपाइँ समूह बैठकहरु, जहाँ सबै भाग लिन सक्नुहुन्छ बनाउन को लागी संभावना दिन्छ। भनिएको बैठक को निर्माता अन्य मानिसहरु संग एक लि shares्क साझा गर्दछ, ताकि उनीहरु बैठक वा च्याट को उपयोग गर्न सक्षम हुनेछन्।
तपाइँ मात्र एक गुगल खाता (जीमेल) यो सेवा को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक छ, त्यसैले यो सबै समय मा एक धेरै सुलभ विकल्प हो। इन्टरफेस कुनै समस्या र यो गुगल सेवा छ साथै धेरै अतिरिक्त प्रकार्यहरु दिन्छ, लाइभ क्याप्शन बाट, बैठकहरु रेकर्ड गर्ने क्षमता, पाठ वा फाइलहरु पठाउन च्याट र धेरै धेरै। तेसैले कार्यहरु को मामला मा, यो विन्डोज मा FaceTime को लागी एक राम्रो विकल्प हो, जो खाता मा लायक छ।
गुगल मीट बिभिन्न संस्करणहरु छन्, तर महामारी को कारण केहि महिना को लागी, प्रीमियम सुविधाहरु को लागी पैसा तिर्न को आवश्यकता बिना दिईन्छ। प्रीमियम संस्करण एक हो कि धेरै प्रकार्यहरु प्रदान गर्दछ र मुख्य रूप बाट सरकार वा स्कूलहरु को रूप मा कम्पनीहरु वा संस्थाहरु, मा लक्षित छ। अब तपाइँ यसलाई सित्तैमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कम से कम यी महिनाहरुमा, गुगलले फेरि निकट भविष्य मा यो पहुँच सीमित गर्न सक्छ।
यो विकल्प धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यो हो कि फेसबुक मेसेन्जर विन्डोज मा फेसटाइम को एक विकल्प को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जाल को सन्देश सेवा हाम्रो कम्प्यूटर मा ब्राउजर बाट सुलभ छ र यस प्रकार यो सम्भव छ व्यक्तिगत र समूह कल र भिडियो कल गर्नुहोस्। यो एक राम्रो तरीका हो सबै समय मा हाम्रा साथीहरु र परिवार संग सम्पर्क मा रहन को लागी।
यो विकल्प एक हो कि व्यक्तिगत उपयोग को लागी अधिक सक्षम छ। फेसबुक मा हाम्रा साथीहरु सामान्यतया वास्तविक साथीहरु, परिचितहरु, आफन्तहरु र केहि अवस्थामा सहकर्मी हुन्। मेसेन्जर मा च्याट सामान्यतया काम गर्दैनन्, यो एक एप हो कि यो उद्देश्य को लागी प्रयोग गरीएको छैन। तेसैले, यदि तपाइँ एक एप वा सेवा को लागी तपाइँको साथीहरु वा परिवार संग कल र भिडियो कल गर्न को लागी देख्दै हुनुहुन्थ्यो, यो यस सम्बन्धमा विचार गर्न को लागी अर्को राम्रो विकल्प हो।
9 सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क र वाटरमार्क भिडियो सम्पादकहरू
विन्डोज मा FaceTime को विकल्प को बाकी को जस्तै, यो एक नि: शुल्क विकल्प हो। हामीलाई मात्र फेसबुक एकाउन्ट चाहिन्छ हाम्रो विन्डोज पीसी मा मेसेन्जर पहुँच गर्न। तेसैले यो पीसी मा सजीलै साथीहरु र परिवार संग च्याट गर्न को लागी सम्भव हुनेछ। हामी पनि भ्वाइस कल र भिडियो कल गर्न सक्छौं, हाम्रो कम्प्युटर मा वेबक्याम को उपयोग गरेर। यो विकल्प को उपयोग सरल छ, त्यसैले यो पनि एक राम्रो विकल्प हो कि धेरै कारण को लागी विचार गर्न को लागी हो।
अन्तमा, हामी विन्डोज को लागी फेसटाइम को लागी एक विकल्प पाउँछौं व्यावसायिक उपयोग को लागी अधिक तैयार छ। माइक्रोसफ्ट टीम २०२० पछि महामारी को कारणले सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अनुप्रयोगहरु मध्ये एक हो। यस अनुप्रयोग को लागी धन्यवाद तपाइँ तपाइँको कामका सहकर्मीहरु संग सम्पर्क गर्न को लागी सक्षम हुनुहुनेछ, सजिलै संग तपाइँको कम्प्युटर मा समूह, कोठा र बैठकहरु बनाउन को लागी सक्षम हुदै, विभिन्न अपरेटि systems सिस्टमहरु संग मिल्दो पनि। यो अनुप्रयोग मा, अडियो कल को रूप मा साथै भिडियो कल को अनुमति छ। यद्यपि यो मुख्य रूप बाट पेशेवर क्षेत्र मा प्रयोग गरीन्छ, यो पनी मित्र र परिवार संग सम्पर्क मा रहन को लागी एक राम्रो तरीका हो।
माइक्रोसफ्ट टोली मा भिडियो कल व्यक्तिगत वा एक समूह मा हुन सक्छ, विशाल समूहहरु को लागी समर्थन संग, १०० भन्दा बढी मानिसहरु को, उदाहरण को लागी। यही कारणले गर्दा यो अनुप्रयोग कम्पनीहरु, संगठनहरु वा शैक्षिक केन्द्रहरु मा सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक भएको छ, किनभने यो मान्छे को ठूलो समूह संग बैठकहरु को अनुमति दिन्छ। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ एक च्याट छ जहाँ तपाइँ सन्देशहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, लि links्क साझा गर्नुहोस् वा अन्य व्यक्तिहरु जो त्यो भिडियो कल वा बैठक मा भाग लिइरहेका छन् कि समय मा फाइल पठाउन सक्नुहुन्छ।
माइक्रोसफ्ट टोलीहरु पनि एक शामिल आफ्नो कल र भिडियो कल मा प्रकार्यहरु को ठूलो संख्या। प्रत्यक्ष उपशीर्षकहरु बाट, उनीहरुलाई रेकर्डि and गर्न को लागी र उनीहरुको पछी डाउनलोड गर्न को लागी, यी कलहरुको सारांश पनि उत्पन्न गर्न सकिन्छ, वा यो एक कल को समयमा मानिसहरुलाई चुप गर्न सम्भव छ, ताकि केवल एक व्यक्ति बिना कुनै रुकावट को बोल्न सक्छ, उदाहरण को लागी। यसको धेरै प्रकार्यहरु यो एक कम्पनीहरु र संस्थाहरु मा पछिल्लो बर्ष देखि सबैभन्दा लोकप्रिय उपकरण मध्ये एक बनाउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » कार्यक्रमहरू » फेसटाइम विन्डोज मा प्रयोग गर्न सकिन्छ?5नि: शुल्क विकल्प
महल क्रश मा अनन्त रत्न पाउनुहोस्: के यो सम्भव छ?
सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को लागी एक कम्प्यूटर मा मोन्टेज बनाउन को लागी